Sawirro + Xog cusub: Weerarkii ismiidaaminta ee agagaarka Villa Somalia - Caasimada Online
Home Warar Sawirro + Xog cusub: Weerarkii ismiidaaminta ee agagaarka Villa Somalia
Sawirro + Xog cusub: Weerarkii ismiidaaminta ee agagaarka Villa Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) – Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagau dhuftay Bar-koontorool oo ciidamada Dowladdu ay ku leeyihiin Isgooyska Xaawa-taako ee magalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka.
Saraakiisha ammaanka ayaa xaqiijiyay Qaraxan in ay ku geeriyoodeen 5 Qof, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tirro lagu sheegay 9 ruux oo goobta Qaraxa ku sugnaa.
Dadka qaraxa ku dhibaatoobay ayaa waxaa ku jira dumar iyo dhalinyaro. Dad badan ayaa dhintay, kuwo kalana way ku dhaawacmeen.
Goobjoogayaal ayaa shaeegay in gaariga qarax fuliyaya uu ahaa Caasi isla markaana uu aad ugu dhawaaday Koontoroolka ciidamada oo ku yaal dhinaca wadada aada Boondheere ee geesta ku heysa Golaha Murtida iyo Mada’daalada Qaranka.
Qaraxa ayaa sidoo kale bohol weyn ka qoday bartamaha laamiga ka soo horjeeda tiyaatarka, isagoo burbur xooggan u geystay gaadiid wadada marayay iyo dhismeyaasha halkaas ku dhow sida guriga hooyooyinka oo ay ka soo daateen muraayadihii daaqadaha.